Sidee warbaahinta bulshada iigu keeneysaa marinka taraafikada?
Maanta, waxaan kuu sheegi doonaa siyaabaha ugu fiican ee kor u qaadi kara taraafikada shabakadda iyadoo loo marayo warbaahinta bulshada. Hayso akhriska si aad u ogaato xeeladaha horumarsan ee lagu hagaajinayo taraafikadaada internetka. Afar siyaabood oo aad ku heli karto shabakad gaadiid intaa ka badan oo aad ka hesho warbaahinta bulshada
Isku day talooyinkan si aad u soo jiidatid gaadiid dheeraad ah goobtaada:
Ka qaybqaadashada joornaalada, kooxaha iyo jaaliyadaha
Kooxaha warbaahinta bulshada iyo joornaalada waxay kufiican yihiin kor u qaadista taraafikadaada internetka. Marka lagu daro inaad ku siiso fursad aad ku xirto macaamiishaada iyo noocyada kale ee warshadaha isku midka ah, waxay kaa caawiyaan inaad dhisato xiriir ganacsi oo xoog leh - divertimento bimbi torino.
Ka qayb qaadashada joornaalada Twitter iyo bulshooyinka warbaahinta bulshada ee Facebook iyo LinkedIn, waxaad kordhinaysaa baraarujintaada iyo aragtidaada. Helitaanka jaaliyadaha ku jira warshadahaaga waa sahlan marka aad ka fekereyso. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waxay ku xirantahay shabakadaada iyo inaad ogaatid kooxaha ay jecel yihiin inay qayb ka yihiin. Marka aad sameysid bulshadaada, isku day inaad la xiriirto xubnaheeda si joogto ah. Diirad saarista bixinta qiimaha. Waxyaabaha wargelinta ah iyo wada sheekeysiga fikradaha ah ayaa ku boorin doona dhagaystayaasha in ay wax badan ka bartaan astaantaada.
Oo ay ku jiraan sawirada tayada iyo sawirada qoraallada warbaahinta bulshada
Waxaa la caddeeyey in dadka ay ka baaraandegayaan xogta muuqaal ka fiican nooc kasta oo xog ah.
Si aad u noqoto mid sax ah, habka maskaxdeenna waxay u egtahay 60 kun jeer oo ka sarraysa qoraalka caadiga ah.
Sababtoo ah foojignaanshaheena ayaa kaliya helaya gaaban, shabakadaha bulshada waxay mudnaan gaar ah u leeyihiin posts inay la socdaan images.
Si kastaba ha ahaatee, tan micnaheedu maaha inaad marwalba ku darto sawirrada posts. Haddii dhacdo marka graphic uusan ku darin qiimaha fariintaada, waxa fiican inaad ka tagto boostada oo aan sawir lahayn. Waa inaad fahamtaa in barta intarnetka ee dheeraad ah la heli karo oo kaliya marka aad daabacdo sawirrada kuwaas oo la xiriira mawduuca.
Hashtags waxay si gaar ah ugu xiran yihiin Twitter iyo Instagram. Khabiiro caan ah ayaa soo jeedinaya isticmaalka 2-3 farsamooyin iyo faa'iido gaar ah oo ku jira hal tweet on Twitter. Ka hor intaadan isticmaalin wax dohtag ah, qaado wakhtigaaga si aad u ogaato nooca waxyaabaha uu ku qoran yahay ishtag, markaa waxaad iska ilaalisaa xaaladaha adag. Marka ay timaado boostooyinka Instagram, hal boostada waxaad isticmaali kartaa illaa soddon rodol. Ka fogow isticmaalka lihtagaha aadka u caansan sida calaamad ama calaamadeyn, iyo khadku wuu socdaa - kuma kordhin qiimaha ganacsigaaga.
Ka mid ah badhannada wadaaga bulshada ee ku yaal boggaaga
tallaabooyinka dheeraadka ah ee ay qaadato martida goobta si ay ula wadaagaan macluumaadkaaga shabakaddooda. Iyadoo guji deg deg ah, badhanka warbaahinta bulshada ayaa si toos ah u abuuri karta bogga bogga iyo cinwaanka boostada ama maqaalka si ay soo booqdaan isla markiiba u habeeyaan oo u daabacaan.
Marna ha joojin tijaabinta. Waxaa jira had iyo jeer istiraatiijiyad cusub oo suuq-gareeyn ah si loo tijaabiyo. Istaraatijiyad warbaahineed oo bulshadeed ma tahay inaad talaabo qaaddo si aad u hesho gaadiidka internetka? Wax nooga sheeg qaybta faallooyinka - waxaanu jecel nahay dhageysi!